ဘုန်းကျော်: 07/01/2011 - 08/01/2011
စောက်ချိုးတွေ ပြင်၊ ဒါပဲ
သြစတျေးလျ ၀န်ကြီးချုပ်က တစ်ရက်ကို ၁၄၁၈ ဒေါ်လာ ရပါတယ်။ အမေရိကန် သမ္မတက တစ်ရက်ကို ၆၄၇၇ ဒေါ်လာ ရတော့ သြစတျေးလျဝန်ကြီးချုပ်ထက် ပိုများပါတယ်။
သူတို့ က နိုင်ငံရေးသမားတွေဆိုတော့ လစာများများပိုပေးရပါတယ်။ အထင်ကရ ခေါင်းဆောင်တွေလည်း ဖြစ်တယ်ဆိုတော့။ နိုင်ငံရေးသမားတွေထက်ပိုများတဲ့ လစာကို ဘယ်သူကရလဲ။
အင်္ဂလန် ဘုရင်မကြီးရဲ့ ယောက်ျားဖြစ်သူ ချားစ်က တစ်ရက် ၉၇၄၅၅ ဒေါ်လာ ရတယ်။
ဒီငွေတွေကိုဘယ်သူတွေက ပေးတာလဲ။ နောက်ဆုံးတော့ ပြည်သူတွေရဲ့ အခွန်ငွေတွေဆီကပဲ ပေးရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တခြားခံစားခွင့်တွေလည်း ရှိပါတယ်သေးတယ်။ သမ္မတွေထဲမှာ အနဲဆုံးလစာ ရတဲ့သူကတော့ ဇင်ဘာဘွေက သမ္မတ မှုကာဘီ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ရက်ကို ၆၇-ဒေါ်လာပဲရပါတယ်။ ကျနော့်ထက်တောင် နဲသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် သူက ကျနော့်ထက်ပိုပြီး ချမ်းသာလေတယ်။ ဒီလို လစာနဲနဲရတဲ့သူက ဘာ့ကြောင့်အရမ်းချမ်းသာတဲ့ လူ ဖြစ်နေတာလဲ။ အဖြေကတော့ ခိုး လို့ပါ။
မြန်မာနိုင်ငံက ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ၊ သမ္မတွေရဲ့လစာက အများဆုံးတစ်ရက်ကို ဒေါ်လာ ၃၀၊ ၄၀ တောင် မကျော်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒီလူတွေအရမ်းချမ်းသာကြပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့် ချမ်းသာလဲဆိုတော့ အဖြေက ရိုးရိုးလေးပါ။ အသားကုန် ခိုး လို့ပါ။ လစာနဲနဲ ရလေ၊ များများခိုးလေ။
နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ လစာက တစ်ရက်ကို ဘယ်လောက်ရလဲ။ သူက လစာမရှိပဲ ဘာနဲ့ ထမင်းစားလဲ။ မေးချင်လို့ပါ။ မသိလို့ပါ။
Celebrity လို့ပြောရင် နာမည်ကြီးနေတဲ့ ရုပ်ရှင်မင်းသား မင်းသမီးတွေကို အဓိကခေါ်တယ်။ ဒီနေရာမှာ နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်း Celebrity လို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ အမေရိကန် သမ္မတ လည်း စလစ်ဘရစ်တီဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်း ကမ္ဘာ့အလည်မှာ စလစ်ဘရစ်တီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာပြည်က နာမည်ကြီးပြီး လူကြိုက်နဲနေတဲ့ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများကိုတော့ စလစ်ဘရစ်တီ စာရင်းထဲ ထည့်လို့မရပါ။ သူတို့ကိုတော့ နာမည်ကြီး သူခိုးစာရင်း၊ လူဆိုးစာရင်းထဲမှာတော့ ထည့်ပါတယ်။ တာလီဘန်အဖွဲ့လိုမျိုးနဲ့ တန်းတူ ထားလို့ရပါတယ်။
နိုင်ငံတော် ခေါင်းဆောင်တွေ၊ ဘုရင်တွေကို ဘယ်သူတွေ ထမင်းကျွေးလဲလို့ မေး ရင် ပြည်သူတွေ ကပဲ ပေးရ၊ ကျွေးရပါတယ်။ ဒီလူတွေက ဖန်တီးရှင်တွေမဟုတ်တော့ ဥစ္စာဓနတွေကို ဥုံဖွ ဆိုပြီး မန်းလို့မရပါ။ ဆိုတော့ ဗိုလ်ချုပ်တွေ၊ ဘုရင်တွေ၊ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကို ပြည်သူတွေကပဲ ထောက်ပံ့ပေးရတယ်။
ပြည်သူက ကျွေးတဲ့ထမင်းကိုစားပြီး ပြည်သူလူထုရဲ့ အကျိုးကို ဆောင်ရွက်တဲ့ ဘုရင်တွေ၊ ၀န်ကြီးချုပ်တွေ၊ သမ္မတတွေ ကမ္ဘာပေါ်မှာအများကြီးပါ။ သူတို့က သိတယ်။ ဘယ်လို သိလဲဆိုတော့ ငါတို့ဟာ ငါတို့ပြည်သူတွေရဲ့ အခွန်ငွေတွေနဲ့ အဆမတန်များတဲ့ လစာတွေကိုယူထားတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ငါတို့က ပိုပြီးသူတို့အပေါ်တာဝန်ရှိတယ်။ သူတို့ကျွေးတဲ့ ထမင်းကိုစားပြီး သူတို့ကောင်းကျိုးကို ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးရှိတယ်။ ဒါ့အပြင် ပြည်သူက သူတို့ကို ထိန်းကျောင်း လို့ရတဲ့ စနစ်နဲ့ဗဟုသုတလည်းရှိတော့ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေ ပေါက်ကရလုပ်လို့ မရဘူး။ သို့ သော် မြန်မာပြည်က နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲဆိုသူများ၊ အာဏာပိုင်များဟာ သူတို့လုပ်စာကို ပြည်သူတွေ ထိုင်စားနေတဲ့ အပေါက်မျိုးနဲ့ ပြည်သူတွေကို စော်ကားကြလေတယ်။
ဘုန်းကြီးတွေလည်း အာဏာရှင်ပဲ။ ဘယ်လိုအာဏာရှင်လုပ်လဲဆိုတော့ ဒီလိုပါ။ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ပြောတာကို နားထောင်ရတယ်။ ပြန်ပြောရင် ငရဲကြီးတယ်။ ကိုယ့်ထက် ၀ါကြီးတဲ့ ဘုန်းကြီးပြောသမျှ တင်ပါ့ ဘုရား လုပ်ရတယ်။ ဘုန်းကြီးပြောရင် လူတွေက နိုး ဆိုပြီး မဆန့် ကျင်ရဲဘူး။ ဘုန်းကြီးတွေ အာဏာရှင်လုပ်တဲ့အကြောင်းကို ဘုန်းကြီးတွေပဲ ပိုသိပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက ဘုန်းကြီးတွေကို ဘယ်သူက ထမင်းကျွေး တာလဲ။ ပြည်သူပဲ ကျွေးပါတယ်။ ပြည်သူတစ်ယောက်က ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကို အလှူငွေ တစ်ကျပ်လှူတယ်။ အလှူခံတုန်းက ကျောင်းဆောက်ဖို့ဆိုပြီး အလှူခံတယ်။ ပြီးတော့ ဒီဘုန်းကြီးက ကျောင်းတစ်ကျောင်းကို သူ့ နာမည်နဲ့ အလှူငွေပြန်ထည့်တယ်။ တကယ်ဆိုရင် လှူဒါန်းသူအားလုံးရဲ့ နာမည်ကို ထည့်သင့်တာပေါ့။ အခုကြတော့ သူကပဲ သူဝင်ငွေနဲ့ လှူသလိုမျိုး နာမည်ကောင်းယူတယ်။ ဒါမကောင်းဘူး။
ဗမာပြည်မှာ ဘုန်းကြီးတွေ တအားများတယ်။ ဘုန်းကြီးတွေများတာ မကောင်းဘူး။ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု ကျဆင်းစေတယ်။ ဘုန်းကြီးဆိုတာက စက်ရုံက အလုပ်သမားလို၊ လယ်သမားလို အလုပ်လုပ်လို့မရတော့ ကုန်ထွက်မရှိဘူး။ ပါးစပ်ပေါက် တိုးတာပဲရှိတယ်။ စစ်သား လေးသိန်း၊ ဘုန်းကြီးလေးသိန်း ကိုတင်ကျွေးရတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ စရိတ်ကို တွက်ကြည့်ရင် သိနိုင်တယ်။ ဒီရှစ်သိန်းက ကိုယ့်စပါးကိုယ်စိုက် စားရင်တော့ကောင်းတာပေါ့။ အခုကြတော့ သိတဲ့အတိုင်းပဲ။
အထက်မှာပြောသလို ၀န်းကြီးချုပ်တွေ၊ ဘုရင်တွေ၊ မြန်မာပြည်ကနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေအပါအ၀င် အားလုံးသော ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကို ထမင်းကျွေးရတဲ့ ပြည်သူ့ ရဲ့ ဝန် ဘယ်လောက်ကြီးလဲဆိုတာကို သဘောက်ဖို့လိုပါတယ်။ ကျေးဇူးသိတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ ပြည်သူတွေရဲ့ ထမင်းတွေကို ဒီလူတွေရဲ့ လည်ချောင်းထဲမှာ ခြေမနဲ့ ကလော်ထုတ်ရင်တောင် အတောင့်လိုက်ထွက်လာနိုင်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ထမင်းကျွေးတဲ့လူကို ချေချေငံငံ ဆက်ဆံသင့်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာပြည်ကတော့ ဒီလို မဆက်ဆံတဲ့အပြင် သူတို့က ပြည်သူကို ထမင်းကျွေးရတဲ့ပုံစံနဲ့ သူတို့စောက်ခွက်တွေက မာ, နေတာပဲ။ ဒါ့ကြောင့် စောက်ချိုးတွေ ပြင်။ ဒါပဲ။
ရည်ညွှန်း။ ။ http://mywage.org.au/main/celebrity-pay/politician-pay
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Saturday, July 30, 2011
စောမူစာ Moon Hsar က သြစတျေးလျနိုငံ ဘစ်စဘိန်မှာနေတယ်။ ကိုထူးထူးဟန်နဲ့ တစ်မြိူ့ တည်းပါ။ သူက က၇င်။ အသက် ၄၄။ ခလေး ငါးယောက်အဖေ။ သူလည်း အစုလိုက်အပြူံလိုက်သတ်တယ်လို့ဒီနေ့ နိုင်ငံတကာ မီဒီယာမှာပြောပြီ။ စစ်ထောင်လှမ်းေ၇းတစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ကေအန်ယူမှာ လျှိူ့ ထောက်လှမ်းခဲ့ပါတယ်။ သိချင်၇င် ဖတ်ကြည့်ပါ။ နောက်ထပ် သြစီမှာ ၇ှိတဲ့ ထောက်လှမ်းေ၇းဟောင်းတွေ သူတို့ လို့စွန့် ဖို့ ၇ှိတယ်လို့ သိ၇တယ်။ အားပေးပါတယ်။ Refugee Moon Hsar gestures during an interview at his home in Brisbane, Friday, July 24, 2011. Hsar, 44, has come forward to confess his secret military past he says caused the deaths of up to 50 people in Burma, while working asasecret agent for the Burmese military between 1984 and 1987. (AAP Image/Dave Hunt) NO ARCHIVING
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Sunday, July 24, 2011
ကိုသိုက်လို့ခေါ်တဲ့ လူက လူရိုးကြီး။ သူက ABSDF တပ်ရင်း (၉) ရဲ့ ရင်းမှုး။ ၁၉၈၈-ခုနှစ်မှာ မာစတာဘွဲ့ကို သင်ယူနေတဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်။ လူက လူချော။ စကားပြောရင် အသံကျယ်ကျယ်နဲ့။
ကိုပိန် လို့ခေါ်တဲ့လူက ကိုသိုက်ရဲ့ သူငယ်ချင်း။ အသားဖြူဖြူ တရုတ်စပ်။ သူက တပ်ရင်းမှုး။ ကိုသိုက်နဲ့ကိုပိန်က ဘော်ဒါတွေ။ ကျနော်က သူတို့ရဲ့ ပရိသတ်။ အမြဲတမ်း ကိုပိန်ရဲ့ တော်ကီတွေထဲမှာ နစ်မျှောနေသူပေါ့။ တခါတလေ ကိုပိန်က သူလည်း ဒေါက်တာပိန် ဖြစ်ချင်တယ်လို့ပြောတယ်။ သူများတွေကို အားကျလို့။ သို့သော် ဘိုလိုလည်း အရမ်းကျွမ်းတယ်ထင်လား။ ဘုန်းကြီးတွေ တရားစာဖတ်တဲ့လေသံနဲ့ ဘိုလိုပြောတက်သူ။ This isabook ဆိုရင် သူက သစ်စ်အစ်စ်အက်ဘုတ်ခ် လို့ဆိုပြီးဖတ်တဲ့လူ။ အခုတော့ အမေရိကန်မှာ ဆူရှီဆိုင်ပိုင်ရှင်အဖြစ် သူ့ အနာဂတ်ကိုရွေးချယ်လေတယ်။ သူလည်း ၈၈-ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား။တပ်ရင်းမှုးဟောင်းကြီးပေါ့။
၈၈-ခုနှစ်မှာ သူတို့နှစ်ယောက်က သူများတွေတောခိုကြတော့ သူတို့လည်း အားကြမခံတောခိုကြလေတယ်။
ကိုပိန်က လေချွန်တာအရမ်းကျွမ်းတယ်။ လေလေးတချွန်ချွန်နဲ့ အမြဲတမ်းပြုံးပျော်ပြီး သူများတွေကို ကြပ် တာကိုဝါသနာအရမ်းပါတဲ့လူ။
ကိုသိုက် နှင့် ကိုပိန်
တနေ့တော့ ကိုပိန်ရဲ့ သွားတစ်ချောင်း ကျိုးသွားတယ်။ ကိုပိန်က ကျိုးသွားတဲ့ သူ့သွားကို သေသေချာချာထုတ်ပိုးပြီး ဘုရားစင်ပေါ်မှာ တင်ထားတယ်။ ကိုသိုက်နဲ့ကိုပိန်က အတူနေတော့ ဘုရားတရားကိုင်းရှိုင်းတဲ့ ကိုသိုက်လည်း ဘုရားရှစ်ခိုးလေတယ်ပေါ့။ ဒီမှာတင် ကိုသိုက်က သေသေချာချာ ထုတ်ထားတဲ့ ကိုပိန်ရဲ့ သွားကိုတွေ့ပြီး ဒီလိုမေးတယ်။
"ကိုပိန် ဒီသွားက ဘယ်သူ့ ဟာလဲ" လို့ဆိုပြီး အံ့သြတကြီးနဲ့မေးတယ်။ ဒီမှာတင် ကိုပိန်က ဒီလိုပြောတယ်။
"ဒါ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးက စွန့်သွားတဲ့ စွယ်တော်ကြီး" ဆိုပြီးခပ်တည်တည်နဲ့ ကိုသိုက်ကို ကြပ်လေတယ်။
သူများကြပ်တာကို ကြပ်မှန်းမသိတဲ့ကိုသိုက်....ကိုပိန်ရဲ့ စွယ်တော်ကြီးကို အားရပါးရ ဖင်မှုထောင်ထောင်ပြီး ရှစ်ခိုးလေတယ်။ လိုချင်တဲ့ဆုကိုတောင်းပါတယ်။ စွယ်တော်ကြီးဆိုတော့ ဖူးရခဲတယ်ဆိုပြီး ကိုပိန်ကို ကြိတ်ပြီး ကျေးဇူးတင်လေတယ်။
သုံးလေးရက်လောက်ကြာတော့ ကိုပိန်က သူ့ သူငယ်ချင်းကို အတော်လေးသနားသွားပြီ။ အမြဲတန်း သူ့ စွယ်တော်ကြီးကို ဖူးနေလို့။ ဒီမှာတင်ကိုပိန်က-
"ဟေ့လူ အဲဒါ ကျနော့်သွားဗျ" လို့ စပ်ဖြဲဖြဲနဲ့ ပြောလေတယ်။ ဒီမှာတင် ကိုသိုက်မျက်နှာနီရဲပြီး-
"ခင်ဗျားဗျာ" ဆိုပြီး ဆဲပါလေရော။
အခုတော့ ကိုသိုက်က သြစတျေးလျနိုင်ငံ ဆစ်ဒနီမှာနေပြီး ကိုပိန်က အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာပါ။
မှတ်ချက်။ ။ ခွင့်မတောင်းပဲရေးမိတာကို ခွင့်လွှတ်ပါ။
ပို့ သူ ကိုသောမစ် (ဘာလီ)
Geologist တစ်ယောက်မဟုတ်တော့ ရွှေရှာနည်းကို မသိပါ။ တွေ့ ဘူးတဲ့ အရာကိုပြောပြပါမယ်။ ပထမဆုံး ရွှေကြောရှိနိုင်မဲ့ နေရာမှာ ရှာဖွေရေးလုပ်ဖို့အတွက် အစိုးရဆီမှာ ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံရပါတယ်။ အစိုးရကနေ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်ဆီးမှု၊ ဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်တွေရှိမရှိ စစ်ဆေးပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာလို အစိုးရက အာဏာရှိတဲ့အတိုင်း ရှာစေဆိုပြီး လုပ်လို့မရပါ။ ဥပမာ ရှာဖွေရေးလုပ်မဲ့နေရာမှာ ဒေသခံရွာတွေရှိကြည့်ပါ။ ရှာဖွေရေးကို လုံးဝခွင့်မပြု။ တောရိုင်းတိရဆန်တွေနဲ့ အပင်တွေကို ထိခိုက်ပျက်ဆီးမှု ရှိစေနိုင်တယ်ဆိုရင်လည်း ရှာဖွေရေးလိုင်စင်ထုတ်မပေးပါ။
Stakeholder engagement လို့ခေါ်တဲ့ ဘက်ပေါင်းစုံပါဝင်နိုင်မှုရဲ့ သဘာတူညီမှု့ လည်း ရယူပါတယ်။ ဥပမာ ဒေသခံရွာသား၊ အစိုးရ၊ အန်ဂျီအို၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ရှာဖွေရေးအတွက် တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်ရပါတယ်။ အားလုံးအတွက် အကျိုးရှိစေမှ အစိုးရက ရှာဖွေရေးလိုင်စင်ချပေးပါတယ်။
လိုင်စင်ရတာနဲ့ Drilling တူးပါတယ်။ မြေအောက်ကမီတာ ၂၀၀၀ ကနေ သုံးထောင်လောက်အထိမှာ ရွှေကြောရှိမရှိကို Sample နမှုနာ ကောက်ပါတယ်။ ရွှေကြောဆိုတာက ကျောက်တစ်တန်မှာ ရွှေအောင်စ ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတဲ့ အရာဖြစ်ပါတယ်။ အများဆုံးက ကျောက်တစ်တန်မှာ ရွှေအောင်စ (၂.၅) လောက်ရှိရင် မိုင်းတူးနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်အသေးစိတ် စီးပွားဖြစ်မဖြစ်ကို တွက်ချက်ပြီးမှ တူးလေ့ရှိပါတယ်။ ကုန်ကျစရိတ်နဲ့ အမြတ်ကို တွက်ချက်ပြီး အမြတ်များများရမှ တူးပါတယ်။ ဒါက ဘူမိဗေဒပညာရှင်များရဲ့ အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
Drilling မှာ သုံးမျိုးရှိပါတယ်။ RC၊ RAB၊Diamond ဆိုတဲ့ မြေအောက်ကျောက်နမှုနာတွေကို စုတ်ယူ၊ တူးယူတဲ့ စက်တွေကိုသုံးပြီး ရွှေရှာတဲ့နည်းပါ။ပြီးရင် ကျောက်နမှုနာတွေကို ဓာတ်ခွဲခန်းကို ပို့ပါတယ်။ ကုန်ကျစရိတ်က အရမ်းကြီးပါတယ်။ ဓာတ်ခွဲခန်းက ရလာတဲ့ Result တွေကို ကွန်ပြူတာနဲ့ အဆင့်ဆင့် တွက်ချက်ပြီးမှာ Ore Body ကိုအကွက်ရိုက်ပါတယ်။ မိုင်းနင်းဆော့ဖ်ဝဲယားတွေနဲ့ ဆိုတော့ သိတ်မခက်ပါဘူး။ အမြတ်များများရနိုင်မယ်လို့ ထင်ရင် ရွှေတူးလို့ရပါတယ်။ တူးနည်းနှစ်ခုရှိပါတယ်။ Open Pit နဲ့ Underground နည်းဆိုပြီးသုံးပါတယ်။ Underground နည်းက ဈေးပေါတယ်။ Open Pit က ကျွင်းအကြီးကြီးကိုတူးတဲ့နည်းဆိုတော့ ငွေကုန်များတယ်။ မြေအောက်ထဲမှာ ကားတွေတောင် မောင်းလို့ရတဲ့ မြေအောက်မိုင်းတူးနည်းက အရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။
သြစတျေးလျမိုင်းမှာ လုပ်ဘူးသူတိုင်း အပူအအေးဒဏ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိရပါတယ်။ ပူရင် အရမ်းပူတယ်။ အေးရင် အရမ်းအေးတယ်။ အပူချိန် ၅၀ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်လောက်အောက်မှာ အလုပ်လုပ်ရတယ်။ တခါတလေ နှာခေါင်းသွေးလျှံတယ်။ မိုင်းအလုပ်က ညစ်ပတ်တယ်။ ပင်ပန်းတယ်။ ကိုယ်ကာယကို သုံးရတယ်။ ရုံးထဲမှာ ကွန်ပြူတာနဲ့ အချိန်ဖြုန်းတာရှိသလို နေပူထဲမှာ Tough Book ဟုခေါ်သော နေပူခံ၊ မိုးရွာတာကိုခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့ ကွန်ပြူတာနဲ့ အလုပ်လုပ်တာလည်းရှိတယ်။
အများအားဖြင့် ကျနော့်အလုပ်သည် အပြင်မှာ လုပ်ရတာက ပိုများသည်။ အပြင်မှာလုပ်ရတော့ အဓိကကြောက်စရာကောင်းတာက ယင်ကောင်တွေ။ နေပူရင် ယင်ကောင်တွေ ထွက်တယ်။ ကိုယ်ပေါ်က ချွေးတွေကို လာစုပ်တယ်။ ယင်ကောင်ဆိုတာက တစ်ကောင်နှစ်ကောင်မဟုတ်။ ရာနဲ့ချီပြီးအနည်းဆုံးရှိမယ်။ Fly net လို့ခေါ်တဲ့ ယင်ကောင်မ၀င်နိုင်အောင် လုပ်ထားတဲ့ ခြင်ထောင်သေးသေးလေးကို မျက်နှာမှာ ၀တ်ထားရတယ်။ မ၀တ်ထားရင် အလုပ်လုပ်လို့မရဘူး။ ဒီလောက်ထိဆိုးတဲ့ ယင်ကောင်။
ရေများများသောက်ရတယ်။ ရေငတ်သေတဲ့ လူတွေအများကြီး။ နေပူတော့ ရေသောက်။ ဓာတ်ဆားရည်အထုတ်ပါဆောင်ထားရတယ်။ ဆားဓာတ်ဖြည့်ဖို့။ တစ်ရက်လျှင် မနက် (၆) နာရီကနေ ညနေ (၆) နာရီထိ အလုပ်လုပ်တာဆိုတော့၊ ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် အန်ဂျီအိုရောင်ရောင် နိုင်ငံရေးသမားရောင်ရောင် တော်လှန်ရေးသမားငကြောင်တွေလုပ်တဲ့ အလုပ်လောက်တော့ ဘုန်းကျော် သနားတယ်။ တခါတလောက် ဒီလူတွေမိုင်းမှာလုပ်ဘူးစေချင်တယ်။ နဖူးကချွေး ဖင်ကြားထဲအထိရောက်တယ်။
တောထဲမှာ လမ်းမရှိဘူး။ ကိုယ့်လမ်းကို လမ်းခရုစာနဲ့ ထိုးဖောက်ရတယ်။ Global Positioning System (GPS) သုံးရတယ်။ မြေပုံပါရတယ်။ လမ်းပျောက်လို့ကတော့ မလွယ်။ လမ်းပျောက်လို့သေတဲ့မသာတွေတစ်ပုံကြီး။ မြေပြိုလို့သေတဲ့မသာတွေလည်း မနည်း။ ကျောက်ပိလို့၊ ကားကြိတ်လို့သေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။ မိုင်းလုပ်ငန်းသည် အသက်အန္တရာယ် အရမ်းကြီးသည်။ ဒါ့ကြောင့် Safety ကို ဦးစားပေးသည်။ လေယျာဉ်ခဏခဏစီးရသည်။ လေယျာဉ်စီးရတာလည်း သိတဲ့အတိုင်း။ ပျက်ကြရင်လျှောနိုင်တယ်။
ဝါရှင်တန်ရှိ မြန်မာအစိုးရသံရုံးမှ ပထမ အတွင်းဝန် ဦးစိုးအောင်သည် တကယ်သတ္တိရှိသော ၀န်ထမ်းတဦးဖြစ်တယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ သူနဲ့ပက်သက်လို့အမေရိကန်အခြေစိုက် ၈၈-မျိုးဆက်တွေက ကူညီဖို့လုံးဝအသင့်ရှိတယ်လို့ သိရတယ်။ သူတို့အပြင် ကျနော်တို့သြစတျေးလျကလည်း အဆင်သင့်ပါပဲ။ တခုပဲ အားမရတာက တခြားသံရုံးက လူတွေ ဘာ့ကြောင့် သူ့ လိုမလုပ်ကြလဲ မသိဘူး။ ဦးစိုးအောင်ရေ ဘာမှအားမငယ်နဲ့။
ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့က စပြီး မြန်မာစစ်အုပ်စု ရဲ့ မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံတပ်တွေက ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ရဲ့ အခြေစိုက်စခန်းတွေကို စတင်တိုက်ခိုက်တာ အားလုံး သိကြပြီးဖြစ်မှာပါ၊ အစပိုင်းမှာ ပြင်းပြင်းထန်ထန်စစ်ပွဲတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွါးခဲ့ပြီး ဒီကနေ့အထိလဲ နှစ်ဖက်အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ဆွေးနွေးနေကြတယ် ဆိုပေမည့် စစ်ပွဲငယ်တွေ ကြိုကြားကြိုကြား ဖြစ်ပေါ်နေဆဲပါ၊ ဗမာစစ်တပ် နဲ့ ကချင်စစ်တပ် နှစ်ဖက်စလုံးမှာ အကျအဆုံးတွေ၊ ဒဏ်ရာရသူတွေအမြောက်အများ ရှိခဲ့ပါတယ်၊ ပိုပြီး ဆုံးရှုံးနစ်နာရတာကတော့ ကချင်ပြည်သူတွေပါ၊ ဗမာစစ်တပ်ရဲ့ အနိုင်ကျင့်မှု၊ လုယက်မှု၊ အဓမ္မပေါ်တာဆွဲမှုတွေကြောင့်သောင်းနဲ့ချီတဲ့ ပြည်သူတွေ နေရပ်ဒေသကို စွန့်ခွါထွက်ပြေးကြရပါတယ်၊ တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်က ကေအိုင်အေ ဌာနချုပ်ရှိရာ လိုင်ဇာ မှာခိုလှုံနေကြတာ ဒုက္ခသည်ဦးရေ ၁၄၀၀၀ ကျော်ရှိပါတယ်၊
ထောင်ပေါင်းများစွာကတော့ တရုပ်နိုင်ငံထဲ ဝင်ပြေးကြပြီး ဆွေမျိုး၊ မိတ်ဆွေများထံ ခိုလှုံနေကြရပါတယ်၊ တချို့က နယ်စပ်ကို မပြေးပဲ အထက်ဖက်က ဗန်းမော်၊ ဝိုင်းမော်မြို့တွေက ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်းတွေ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေမှာ ခိုလှုံနေကြရပါတယ်၊ မပြေးနိုင်သူတွေကတော့ ကချင်တပ်ကို ထောက်ခံသူများအဖြစ် ဗမာစစ်တပ်က ဖမ်းဆီး ညှင်းပန်းနှိပ်စက်တာ၊ သတ်ဖြတ်တာ ခံကြရပါတယ်၊ ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် ကချင်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းရဲ့ သတင်းပို့ချက်အရ ကချင်အမျိုးသမီး အနည်းဆုံး ၁၈ ယောက်လောက်ဟာ ဗမာစစ်သားတွေရဲ့ အုပ်စုလိုက်မုဒိန်းကျင့်တာခံကြရပြီး တချို့မိန်းကလေးတွေကို စစ်သားတွေက မုဒိန်းကျင့်ပြီးတာနဲ့ သတ်ပစ်လိုက်ကြတယ်လို့ ကြားသိရပါတယ်၊
ဒီအစီရင်ခံစာရေးသူတွေကပဲ "ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ ဟာ ကချင်လူမျိုးများရဲ့ ဂုဏ်ယူစရာပိုင်ဆိုင်မှု၊ ယဉ်ကျေးမှုရဲ့ အသည်းနှလုံး ဖြစ်ပြီး ဒီမြစ်ဆုံဟာ ဆည်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် လုံးဝပျောက်ပျက်သွားမှာဖြစ်လို့ အဲဒီဆုံးရှုံးမှုကြီးဟာဖြင့် ကချင်လူမျိုးများသာမက မြန်မာပြည်သူများအားလုံးအတွက် ကြောက်ခမန်းလိလိကြီးမားတဲ့ ဝမ်းနည်းကြေကွဲစရာကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်" လို့လဲ သတိပေးထားပါတယ်၊ ရေလွှမ်းမိုးခံရမည့် ကျေးရွာတွေ၊ ရွှေ့ပြောင်းနေရာချရမည့် ပြည်သူတွေ၊ အဖျက်ဆီးခံရမည့် သစ်တောကြီးတွေ၊ ထာဝရပျောက်ဆုံးသွားမည့် သဘာဝအလှအပတွေ၊ ဆက်လက်မရှင်သန်နိုင်တော့မည့် ရှားပါးသစ်ပင်တွေ၊ ပန်းတွေ နဲ့ ရေသတ္တဝါတွေ အကြောင်းတင်ပြသတိပေးထားသလို ဧရာဝတီမြစ်ရေစီးဆင်းမှု နှေးကွေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် ပင်လယ်ဘက်က ဆားငံရေတွေ ပြန်လည်စီးဝင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စပါးကျီဖြစ်တဲ့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသမှာ စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ ရေလုပ်ငန်းတွေ ပျက်စီးကြမည့်အကြောင်း ထောက်ပြထားပါတယ်၊
နောက်ဆုံးမှာတော့ အစီရင်ခံစာရေးသာသူ ပညာရှင်များက တရုတ်၊မြန်မာ အာဏာပိုင်များကို "မြစ်ဆုံရေကာတာဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းကို စွန့်လွှတ်ဖို့ နဲ့ မဖြစ်မနေဆောက်မှဖြစ်မယ်ဆိုရင် လဲ မြစ်ဆုံမှာ မဆောက်ပဲ မြစ်ဆုံရဲ့အထက် မေခ နဲ့ မလိခမြစ်များမှာ အသေးစား ဆည် နှစ်ခုအစားထိုးဆောက်ဖို့” အကြံပြုထားပါတယ်၊
အဲဒီ ပညာရှင်များရဲ့ တာဝန်သိသိတင်ပြချက်တွေကို တရုတ်၊မြန်မာ အာဏာပိုင်များက ဒေါသတကြီး ညင်းပယ်လိုက်ကြပါတယ်၊ အစီရင်ခံစာကိုလဲ လူထုကြားထဲ ရောက်မလာအောင် ဖုံးကွယ်ထားကြပြီး နောက်ထပ်ဆောင်ရွက်ရမည့် တိုင်းတာချက်အဆင့် ၉ ခုကိုလဲ မဆောင်ရွက်တော့ပါ၊ အဲဒီနောက်တော့ ဘယ်သူသေသေ ငတေမာရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ မူဝါဒနဲ့ မြစ်ဆုံဆည်တည်ဆောက်ရေး ကို အားကြိုးမာန်တက်ဆောင်ရွက်နေတော့တာပါ၊
ပညာရှင်များက မြစ်ဆုံဆည်ဟာ စစ်ကိုင်းငလျင်ပြတ်ရွေ့ကြောကြီးနဲ့ နီးလို့ ငလျင်များလှုပ်ခဲ့ရင် မြစ်ကြီးနားမြို့ကြီးတမြို့လုံး စက္ကန် ၂၀ အတွင်းမှာ ရေအောက်နစ်မြုတ်သွားနိုင်တယ်လို့လဲ သတိပေးကြပါတယ်၊ အဲဒီအတွက် စစ်အုပ်စုရဲ့ အရေးယူမှုက မြစ်ကြီးနားမြို့အခြေစိုက် မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကို မြစ်ဆုံရဲ့အထက်ဖက်က ပူတာအိုမြို့ကို ရွှေ့ပြောင်းအခြေချဖို့အမိန့်ထုတ်တာပါ၊ မြစ်ကြီးနားမြို့နေ ပြည်သူများအတွက်တော့ နည်းနည်းလေးမှ စိတ်ပူပုံမရပါ၊
ဘယ်လို ကယ်တင်ကြမလဲ၊ ကျနော်တို့ ဧရာဝတီ ကယ်တင်ရေး (SAVE THE IRRAWADDY) အမျိုးသားရေး လှုပ်ရှားမှုကြီးလုပ်ရမှာပါ၊ ပြည်တွင်းက ပြည်သူတွေက ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံဆည်တည်ဆောက်ရေးကို ကန့်ကွက်ကြောင်း မြန်မာစစ်အုပ်စုကို တောင်းဆိုသင့်သလို ရန်ကုန် မှာရှိတဲ့ တရုတ်သံရုံး၊ မန္တလေးမှာရှိတဲ့ တရုတ်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးများကို ကန့်ကွက်စာတွေ ပေးပို့သင့်ပါတယ်၊
ဧရာဝတီမြစ်ကြီး အနိုင်ကျင့်ခံနေရမှုနဲ့ ကချင်ပြည်နယ် နဲ့ မြန်မာတနိုင်ငံလုံးက ပြည်သူတွေ ထိခိုက်နစ်နာမည့်အရေးကို လူထုသိနားလည်အောင် ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး လူထုအင်အားနဲ့ ဧရာဝတီကို ကာကွယ်ကြရမှာပါ၊ ဆရာတော်၊ သံဃာတော်များကလဲ သူတို့ရဲ့ တရားပွဲများမှာ ဧရာဝတီမြစ်ကြီးရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကို ရည်ညွှန်းဖွဲ့ဆိုပြီး ဧရာဝတီကို စောင့်ရှောက်ကာကွယ်ဖို့လူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိကြောင်း ဟောပြောသင့်ပါတယ်၊ အနုပညာရှင်များကလဲ ဧရာဝတီမြစ်ကြီး အရင်လိုမစီးဆင်းနိုင်တော့ရင် ဖြစ်လာမည့်အကျိုးဆက်တွေကို လူထုနဲ့ စစ်တပ်ထဲက နိုင်ငံချစ်တဲ့ စစ်ဗိုလ်၊ စစ်သားတွေသိအောင် သီချင်းတွေစပ်ဆို၊ စာတမ်းဖတ်ပွဲတွေ၊ ဆွေးနွေးပွဲတွေ လုပ်သင့်ပါတယ်၊ အထူးသဖြင့် လောဘဇောကပ်နေတဲ့ မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေ၊ အလိုတော်ရိစီးပွါးရေးသမားတွေနဲ့ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီအစိုးရတို့ကို မြန်မာပြည်သူတွေဟာ ဧရာဝတီ ကို ထိရင် မခံဘူးဟေ့ ဆိုတာကို သိအောင်ပြသကြဖို့ပါ၊